Khilaaf ka dhashay ishor-istaag lagu sameeyay safar uu taliyaha NISA ku aadi lahaa Qatar - Awdinle Online
Khilaaf ka dhashay ishor-istaag lagu sameeyay safar uu taliyaha NISA ku aadi lahaa Qatar
Dhinaca kale Col. Cabdullahi Dheere Teliyaha Hogaanka Dabagalka oo laheyb ah madaxweyne Farmaajo si weyna qeyb ugu ahaa ololihiisa dib Doorashada ayaa cadaadis lagu saarey in uu dhexdaxaad ka noqdo doorashada madaxtinimo ee dalka kadhici doonta.
Dowlada Mareykanka oo lagu Xagliyo in uu wakiil uyahay Col. Dheere ayaa lasheegey in ay amar kusiisey in uu dhexdhexaad ka noqdo arimaha siyaasada soomaaliya.
Kulan qarsoodi ahaa oo dhex marey MD Farmaajo iyo RW hore Xasan Cali Kheyre 3dii bishan diseember ka dhacey Qasriga madaxtooyada ayaa la fahamsanyahay in uu gar wadeen ka ahaa teliyaha hogaanka dabagalka oo markiisii hore ku kacsanaa Xasan Cali Kheyre.
Musharax Kheyre ayaa wali lafahamsanyahay in uusan ka fogeyn saaxiibadiisii hore isagoon iska ilaaliya fagaare kahadalkii lagu yaqiin iyo in uu dhaliilo hab dhaqanka dowlada hada jirta.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii & banaanbixii Beledweyne
Next articleXildhibaanadii xasaanada laga qaaday ee Puntland oo go’aan ku dhawaaqay